Maka: izinhlelo zokusebenza zokusekelwa kwamakhasimende | Martech Zone
Maka: izinhlelo zokusebenza zokusekela amakhasimende
NgoLwesihlanu, Mashi 27, 2020 NgoLwesihlanu, Mashi 27, 2020 UJayraj Shetty
Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza kuyimboni eqhubeka ngokuqhubekayo. Ngamabhizinisi amaningi andayo alwela ukuba khona kwe-inthanethi, izinhlangano zokuthuthukisa uhlelo lokusebenza zinqunyelwa umsebenzi wazo Kube nokukhuphuka okuqhubekayo kwesidingo sezinhlelo zokusebenza ezidale imakethe yehlula onjiniyela abakhona. Ngaphezu kwalokho, imboni ehlushwa izindleko ezikhuphukayo kanye nezidingo ezikhulayo. Ngaphandle kwalokho, izinhlelo zokusebenza ezikhona zidinga ukugcinwa njalo. Ucwaningo lukhombisa ukuthi kusetshenziswe izinsiza ezingama-65% ukuzama ukugcina ezikhona